Kheladi - विवादको भूमरीबीच एसियन कपमा निस्केका नतिजा
विवादको भूमरीबीच एसियन कपमा निस्केका नतिजा
कुवेत । एएफसी एसियन कप फुटबलको छनोट चरणका लागि टिम भेला पारेर प्रशिक्षण सुरु गर्दा नै मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले यसलाई ‘मिसन इम्पोसिबल’ भनिसकेका थिए । त्यसैले कुवेतको प्रचण्ड गर्मीमा नेपाली टोलीले बेहोरेको नतिजाबारे धेरै माथापच्ची गर्नुको खास अर्थ नरहला ।
खासमा अल्मुताइरीले सही नै भनेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘हाम्रा प्रतिद्वन्द्वी निकै बलिया छन् । सबै विपक्षी टिममा उच्च स्तरको व्यावसायिक फुटबल खेल्ने खेलाडीको बाहुल्य छ । हाम्रो ग्रासरुट फुटबल भएन ।’
एउटा ठूलो युद्धका लागि सेनालाई तयार गर्दै गर्दा कमाण्डरले ‘यो लडाइँमा तिमीहरूको हार निश्चित छ’ भन्नु आफैंमा सही थियो कि गलत, त्यसलाई पनि फरक तरिकाले विश्लेषण गर्न सकिएला । अल्मुताइरीले तयारीकै क्रममा एसियन कपमा आफ्नो टोली छनोट नहुने घोषणा गर्दा पनि त्यसको आलोचना र प्रशंसा दुवै भयो । एउटा पक्ष प्रतियोगिताअघि प्रशिक्षकले त्यस्तो भन्नु सर्वथा गलत रहेको तर्क दिन्छन् भने उनका समर्थकले ‘सही कुरा बोल्ने आँट गरेको’ भन्दै अल्मुताइरीको प्रशंसामा सामाजिक सन्जालका भित्ता रंगाए ।
प्रतियोगिताको मिति नजिकिँदै थियो । मैदानभित्र भन्दा बाहिरको वातावरण खराब बन्दै गयो । खेलाडी र प्रशिक्षकबीचको विवाद सतहमा आयो । खेलाडीले प्रशिक्षकलाई आरोप लगाए भने प्रशिक्षकले खेलाडीको खेदो खने । टोलीका नियमित १० खेलाडीलाई क्याम्प (होटल)बाट निकालियो । माल्दिभ्समा व्यावसायिक फुटबल खेलिरहेका राष्ट्रिय टोलीका कप्तान किरणकुमार लिम्बुले पनि आफ्ना सहकर्मी खेलाडीमाथिको अन्याय सहन सकेनन् । अन्यायविरुद्ध सामाजिक सन्जालमा आफ्ना टिममेटसँग ऐक्यबद्धता जनाउँदै लेखे ।
आफू अराजकताको हद पार गर्ने भए पनि खेलाडीलाई भने सधैं अदबमा राख्न खोज्ने अल्मुताइरी पछि हट्ने वाला थिएनन् । १० खेलाडी त निकालिसकेका थिए, त्यसपछिको पालो किरणको थियो । फेसबुकमा स्टाटस आउनुको नतिजा थियो, ‘किरण पनि टिमबाट आउट’ ।
११ जना मुख्य खेलाडी निकालेपछि प्रशिक्षक अल्मुताइरीले चार नयाँ खेलाडीलाई पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीमा स्थान दिए ।
लगत्तै नेपाली टिम कुवेत सिटीमा हुने प्रतियोगिताको तयारी र उस्तै मौसमसँग घुलमिल हुन कतारको दोहा पुग्यो । दोहामा केही हप्ताको प्रशिक्षण र मैत्रीपूर्ण खेलपछि नेपाली टिम जेठ २१ मा कुवेत ओर्लिएको थियो ।
आधिकारिक खेलमा ‘डेब्यु’ गर्न बाँकी रहेका सात खेलाडीसहित ३२ सदस्यीय नेपाली टिमले कुवेतमा तीन खेलका लागि १० दिन बितायो । यसक्रममा नेपालले समूह ‘ए’ मा जोर्डन, कुवेत र इन्डोनेसियासँग खेल्यो ।
अनुभवी तथा नियमित ‘प्लेइङ सेट’ बाहिरै थियो । जसका कारण कुवेतको तयारीका लागि दोहामा रहँदा नयाँ खेलाडीलाई तयार गर्नुपर्ने बोझ अल्मुताइरीसामु थियो । युवा खेलाडीका लागि भने दोहाको मैत्रीपूर्ण खेल आफूलाई चिन्दै अगाडि बढाउने अवसर पनि थियो । दोहामा नेपालले टिमोर लिस्टे, श्रीलंका र ओमानसँग क्रमशः २–२, १–१ र ०–२ को नजिता निकाल्यो ।
टिमोर लिस्टेसँग २–० ले पछि परेको स्थिति उल्टाउनु, श्रीलंकासँग १–० ले पछि परेको स्थितिमा बराबरी गर्नु र बलियो ओमानविरुद्ध युवा खेलाडीले देखाएको जोसले कुवेती नागरिक अल्मुताइरीको पनि जोस बढायो । हात उठाइसकेको प्रतियोगिताका लागि कुवेत पुगेपछि पनि नेपाली टिमले साँझको ३५–४० डिग्री तापक्रममा पनि पूरा प्रतिबद्ध तयारीलाई निरन्तरता दियो ।
जोर्डनले दिलाएको जोस
प्रतियोगिताको पहिलो खेल जेठ २५ मा जोर्डनसँग थियो । खेल नेपाली समयअनुसार राति १ बजे । नेपाली टिम दुई घण्टाअघि नै जबर अल अहमद अन्तर्राष्ट्रिय मैदान पुगिसकेको थियो । त्यतिबेला नेपालका अन्य दुई प्रतिद्वन्द्वी इन्डोनेसिया र घरेलु टोली कुवेतबीच खेल चलिरहेको थियो ।
खेलाडीमा जोस थियो । फिफा विश्व वरीयतामा आफूभन्दा ७७ स्थान माथि रहेको जोर्डनविरुद्ध पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकियो । आधिकारिक खेलमा ‘डेब्यु’ पाएका गोलरक्षक दीप कार्कीले पहिलो हाफमा पेनाल्टी जोगाएर आफूलाई प्रमाणित गरिदिए । यसले टोलीको मनोबल झनै उच्च बनायो ।
बलियो मानिएको कुवेत १–१ को बराबरीमा खेल्दै थियो । नेपाली टिम ड्रेसिङ रूममा तयारी गर्दै गर्दा कुवेत कागजमा कमजोर मानिएको इन्डोनेसियासँग २–१ को अन्तरमा पराजित भयो । केही समयमात्रै खेल नियाल्न पाएका अल्मुताइरीले ड्रेसिङ रूममा आएर भने ‘असम्भव केही छैन । संयमित भएर खेल्नु । हामी यस्तै नतिजा निकाल्न सक्छौं ।’
तर, त्यो पर्याप्त थिएन । जोर्डन फुटबलको स्तर नेपालको भन्दा धेरै माथि थियो । अल्मुताइरीले महिनौंअघि घोषणा गरेझै दोस्रो हाफमा जोर्डन २–० को विजय नतिजा निकाल्न सफल भयो ।
खेलको नतिजा आफूअनुकूल नभए पनि खेलाडीमा आत्मविश्वास बढ्यो । रक्षक विकास तामाङले त्यही खेलबाट नेपालको जर्सी लगाएका थिए । पहिलो सेटलाई विवादास्पद तरिकाले घरमै छोडेर मध्यपूर्वको भ्रमणमा निस्केका अल्मुताइरीका लागि त्यो निकै उत्साहजनक नतिजा थियो । पछिल्लो पटक ३–० को हार भोगेको जोर्डनविरुद्ध यो अहिलेसम्मको सबैभन्दा साँघुरो हार थियो । र, त खेलपछि हुने पत्रकार सम्मेलनका लागि लिफ्टबाट जाँदै गर्दा उनले गर्वसाथ प्रश्न गरे, ‘गर्व गर्न लायकको छैन त टिम ?’
दोस्रो खेल कुवेतविरुद्ध थियो । नेपाली टिमले कुवेतको कमजोरी पत्ता लगाइसकेको थियो । घरेलु टोलीभित्रको विवाद नेपालको भन्दा उग्र थियो । पुराना खेलाडीलाई स्थान दिँदा समर्थकसमेत खुसी थिएनन् । त्यसैले त नेपालविरुद्धको खेलमा केहीबेर कुवेती समर्थक नेपालको पक्षमा हल्ला गरिरहेका थिए । कुवेतको त्यही कमजोरीमा फाइदा उठाउने अल्मुताइरीको रणनीति थियो ।
कमजोर मानिएको नेपालविरुद्ध समयमै गोल ननिस्कँदा कुवेती टिम गोल निकै दबाबमा थियो । पहिलो हाफमा नेपालले काउन्टर अट्याकमा केही अवसर सिर्जना गरेको थियो । दोस्रो हाफमा पनि पूर्ण रूपमा रक्षात्मक खेल्दै काउन्टर अट्याकमा अवसर खोज्ने अल्मुताइरीको रणनीति थियो । त्यहीअनुसार दुई विंगर आयुश घलान र मनीष डाँगीबाट बढी अपेक्षा गरिएको थियो । तर दोस्रो हाफको दोस्रो मिनेटमै नेपालले दोस्रो गोल बेहोर्यो ।
जोर्डनसँगको खेलमा ‘सोचेभन्दा राम्रो प्रदर्शन’ पाएपछि अल्मुताइरीले कुवेतविरुद्ध पहिलो रोजाइमा कुनै परिवर्तन गरेनन् । नयाँ खेलाडीलाई खेलाएर ‘रिक्स’ मोल्न चाहेनन् । त्यहीअनुसार नेपालले पहिलो २५ मिनेट कुवेतलाई रोक्यो । तर २८औं मिनेटमा नेपालले गोल बेहोर्यो ।
कुवेतविरुद्धको खेल नेपालका लागि नतिजासँगै प्रशिक्षक अल्मुताइरीको स्वास्थ्यका कारण पनि तनावपूर्ण रह्यो । दोस्रो गोल खाएलगत्तै अल्मुताइरी टचलाइनमै बेहोस भएर ढले । लामो समयदेखि मुटुको समस्याबाट गुज्रिइरहेका अल्मुताइरी त्यही कारण बेहोस भएका थिए । उनलाई तत्काल अस्पताल पुर्याइयो । समस्या धेरै ठूलो नभएकाले भोलिपल्ट बिहानै उनी अस्पतालबाट ‘डिस्चार्ज’ भए ।
नेपालले त्यसपछि थप दुई गोल खायो भने दर्शन गुरुङले एक गोल गरे । सन् १९८२ यता पहिलो पटक कुवेती पोस्टमा सफलता हासिल गर्ने फरवार्डको रूपमा दर्शनले नाम लेखाएका थिए । १९८२ मा वाइबी घलेले कुवेतविरुद्ध गोल गरेका थिए । त्यो नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा पहिलो आधिकारिक गोल थियो ।
नतिजा जे भए पनि अल्मुताइरीका लागि यो भ्रमणको धेरै महत्व थियो । उनी सधैं विवादमा आइरहन रुचाउने स्वभावका प्रशिक्षक हुन् । खाडीको भ्रमणमा निस्कनुअघि पनि ११ खेलाडीलाई निकालेर उनले ठूलै जोखिम मोलेका थिए । जसबाट स्वाभाविक रूपमा उनीमाथि चर्को दबाब थियो । उनको मुटुको समस्या बल्झिनुलाई धेरैले त्यो विवादसँग पनि जोडेर हेर्ने गरेका छन् ।
कुवेतसँगको हारसँगै नेपाल प्रतियोगिताबाट एक खेलअघि नै बाहिरियो । दुई पहेँलो कार्डका कारण प्रशिक्षक अल्मुताइरी स्वयं अन्तिम खेलका लागि टेक्निकल एरियामा निलम्बनमा थिए । त्यही कारण सहायक प्रशिक्षक किरण श्रेष्ठले टचलाइनबाट टिमको नेतृत्व सम्हाले ।
इन्डोनेसियाविरुद्ध नेपालले फरवार्ड नीरकुमार राई र रक्षक शिव गुरुङलाई पहिलो रोजाइमा राखेरै ‘डेब्यु’ गरायो । प्रतियोगिताबाट बाहिरिए पनि इन्डोनेसियासँग सम्मानजनक नतिजा निकाल्ने नेपाली टिमको योजना थियो । इन्डोनेसियालाई भने प्रभावशाली जित हासिल गर्न सके उत्कृष्ट उपविजेताको रूपमा एसिया कपमा स्थान बनाउने अवसर थियो ।
प्रभावशाली जित हासिल गर्ने प्रतिबद्धताका साथ मैदान छिरेको इन्डोनेसियाले छैटौं मिनेटमै गोलको खाता खोल्यो । त्यसपछि पनि लगातार गोलको वर्षा भइरह्यो । ११औं मिनेटमा लेफ्ट ब्याक सुमन अर्याल दोस्रो पहेँलो कार्ड दर्शन गर्दै मैदान छाडेपछि नेपाल १० खेलाडीमा समेटिएको थियोे । यसपछि दबाबमा आएको नेपाल अन्त्यमा ७–० को लज्जास्पद हार बेहोर्न बाध्य भयो ।
प्रतियोगिताका तीन खेलमा नेपालले १३ गोल खायो भने एक गोल फर्कायो । यद्यपि प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन भएको विश्वासमा प्रशिक्षक अल्मुताइरी सन्तुष्ट छन् । युवा टोलीबाट विशेषगरी सुरजज्यू ठकुरी, आयुश, मनीष र विकास खवासबाट उनी बढी प्रभावित छन् ।
प्रतीक्षा असार ६
नतिजा र प्रदर्शनभन्दा माथि यसपालि विवाद थियो । कतार र कुवेतको मैदानमा नेपाली टोलीले बिताएका प्रत्येक क्षण राष्ट्रिय टोली विवाद र एन्फा राजनीतिका लागि महत्त्वपूर्ण थिए । राष्ट्रिय टोली विवाद समाधानका लागि एन्फाले बनाएको छानबिन समितिले यही छनोट प्रतियोगितापछि प्रशिक्षक अल्मुताइरी र व्यवस्थापक मधुसुदन उपाध्यायको विकल्प खोज्न अखिल नेपाल फुटबल संघलाई निर्देशन दिएको छ ।
निकालिएका ११ खेलाडीको राष्ट्रिय टोलीमा पुनरागमन होला कि नहोला ? प्रशिक्षक अल्मुताइरी नेपाली टिमसँग रहलान् कि नरहलान् ? यही असार ६ गते हुने एन्फा निर्वाचनले कुवेतको प्रचण्ड गर्मीभन्दा पनि माहोल तताएका बेला भन्न कठिन छ । दोस्रो प्रश्नको उत्तर भने असार ६ को राति आउने नतिजाले नै निर्धारण गर्नेछ ।
श्याम आचार्यको नेतृत्वमा बर्दिया जिल्ला भलिबल संघ गठन